MDC Alliance Inonzi Haisati Yatambira Zvichemo zveBato reTransform Zimbabwe
Kurume 28, 2018
Mubatanidzwa wemapato anopikisa, weMDC Alliance, unoti hausati waona zvichemo zveimwe nhengo yemubatanidzwa uyu, Transform Zimbabwe, iyo iri kunyunyuta kuti imwe nhengo yemubatanidzwa uyu, MDC-T, yave kutodoma nhengo dzebato rayo dzichakwikwidza mumatunhu anonzi akapihwa Transform Zimbabwe pasi pechirongwa chekushanda pamwe chemapato aya.
Mutungamiri weTranform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vaudza vatori venhau kuti musangano wekongiresi yebato ravo wakaitwa mukupera kwesvondo, wakaratidza kusafara nenyaya yekuti MDC-T yekuti yave kutodoma vanhu vachaimirira musarudzo mumatunhu avo.
Vati vakatokwidza chichemo ichi kuMDC Alliance.
Asi vachitaura vakamirira mutungamiri webato ravo reMDC, VaWelshman Ncube avo vanove mutauriri weMDC Alliance, mutauriri weMDC, VaKurauone Chihwayi vati sekuziva kwavo vakuru-vakuru muAlliance havasati vawana chichemo cheTransform Zimbabwe ichi.
Chimwewo chinonzi chisiri kufadza veTransform Zimbabwe ndechekuti pazvigaro zvese gumi nezvipfumbamwe zveNational Assembly zvakapihwa bato iri, hapana kana chimwe chiri mumatunhu ekuMatatabeleland ese ari matatu.
Asi VaChihwayi vati mapato ese ari mumambatanidzwa weMDC Alliance akagara pasi asati abuda nechisungo icho vakazobvumirana vese.
Mutauririri weMDC-T, Muzvare Tabitha Khumalo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingataure vakamirira MDC Alliance, bato ravo rino remekedza mubatanidzwa uyu, uye riri kutevedza zvese zvakabvumiranwa pasi pawo.
Vati nekuda kwaizvozvo bato ravo haringasarudze vanhu kuti vakwikwidze munzvimbo dzakapihwa mapato avanoshanda nawo.
VaNgarivhume vanoti tariro yavo ndeyekuramba vari muMDC Alliance, uye vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe mukati mesvondo rinotevera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaVivid Gwede, vanoti matambudziko akadai anowanikwa pamibatanidzwa yese uye anogadzirika.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira, weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaTabani Moyo, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatungamiriri muMDC Alliance vagadzirise zvichemo zvenhego dzavo.
Pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance, MDC-T, ndiyo ichange iine vamiriri vakawanda kudarika mapato ese, uye inotarisirwa kunge iine nhengo zana negumi neina.
Mamwe mapato ari mumbatanidza uyu, anoti People’s Democratic Party, ZimPF, Zanu Ndonga neMulti Racial Christian Democrats.